Sina 358 fefy harato fiarovana avo lenta ho an'ny fampiharana fonja, fananganana tranobe ho an'ny fiarovana ny fananana Mpanamboatra sy mpamatsy | Pro Fefy
PRO.Fence dia manamboatra sy mizara karazana fefy vy tariby mba hihaona amin'ny fampiharana maro. Manana ekipa mahomby sy milina mandroso izahay afaka mamatsy entana ao anatin'ny 14 andro aorian'ny nahazoana kaomandy. Ny ekipanay QC dia mifehy ny fizarana tsirairay amin'ny fefy misy ny welding, miondrika, ny firakotra ary manolotra serivisy fanangonana mialoha koa izahay mba hitehirizana ny fotoana eny an-toerana.
Ity karazana 358 fefy harato fiarovana avo ity dia vita amin'ny vy malefaka. Ary mazàna vita ao anaty fefy vita anaty galvanisika mafana. Izy io dia mitovy amin'ny fefy vy hafa ao anaty filaharana fa ny harato dia kely manodidina ny 76.2 × 12.7mm ary tariby vy misy savaivony 4mm. Sarotra dia sarotra tokoa ny miditra sy manafika amin'ny fampiasana fitaovana mahazatra. PRO.Fence dia manome fefy fanoherana miakatra miisa 358 vita amin'ny harato mavesatra miaraka amina fiarovana avo lenta amin'ny sakany 2500 mm ary haavon'ny 2000mm ka hatramin'ny 3300mm. Takelaka maromaro azo apetraka eo amboniny. Noho izany dia mety hahatratra ny haavon'ny 6300 mm.
358 Fiarovana harato tariby avo lenta toy ny fanoherana fiakarana sy fanakanana amin'ny alàlan'ny sakana mety tsara hanaovana fefy ao
Fonja, toerana miaramila, fananana indostrialy sy ara-barotra, toby famokarana herinaratra, hopitaly azo antoka sns.
Harato: 76.2 × 12.7mm
Haben'ny tontonana: H2000-3000mm × W2400mm
Paositra: 60 × 60 × 1.5mm
Fittings: SUS304 / mafana atsoboka nandrisika
Vita: norakofana / vovoka nopetahany rano mafana
1) Vita avy amin'ny tariby karbaona kalitao farafahakeliny 4mm savaivony ary farano amin'ny fantsom-boaloboka mafana (zinc mifono hatramin'ny 450g / m2). Ireo dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanoherana ny harafesina sy ny fiainana lava be koa.
2) Ny elanelam-bolan'ny 76.2 × 12.7mm amin'ny savaivony 4mm matevina savaivony dia manjary sarotra tokoa ny manapaka sy miakatra. Miaraka amin'ny tariby misy barbed eo an-tampony, miangavy mba ho fefy fiarovana ambony fonja, hopitaly, toby miaramila, seranam-piaramanidina sns.
3) Mora ny manatitra sy mametraka.
Teo aloha: 3D fefy tariby miolakolaka mifamatotra, fefy manjavozavo malaza ho toy ny fefy fiarovana ny trano fonenana any Amerika Avaratra
Manaraka: Fefy boribory roa mifono vy mifamatotra harato fefy ho an'ny injeniera monisipaly